#Soomaaliya:Miyey Dunidu iloobeen weerarkii argagixisada ee Soomaaliya? | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Soomaaliya:Miyey Dunidu iloobeen weerarkii argagixisada ee Soomaaliya?
#Soomaaliya:Miyey Dunidu iloobeen weerarkii argagixisada ee Soomaaliya?
Talaadadii 14-kii November ee bishaan waxaay aheyd xuskii maalintii madobeyd xili hadda laga joogo hal bil tan iyo markii gaari walxaha qarxa laga soo buxuyey lagu qarxiyey caasimadda Dalka Muqdisho, halkaas oo ay ku nafwayeen boqollaal qof – oo intooda badan la aqoonsan kari wayey meydkoodi.
Waxaay ahayd weerarkii ugu xumaa ee taariikhda Soomaaliya Soo Mara. Qurbo joogta kunol dalkan ingiriska oo kuwa ugu badan qaradan yurub ah, ayaa intooda badan waxaay qabaan oo ay dareensan yihiin in dunidu ay iloowdey musiibada ku habsatey dalkooda.
“Ma aanan arkin nooca warbaahinta ee aan aragno marka qof lagu toogto Manhattan ama xitaa ay wax ka dhacan magaalooyinka sida Paris iyo London, Sidaa ay saxafadda uga hadasho” waad og tahay adiga ahaan, Sidaas waxaa yirii Sahel Yusuf, guddoomiyaha Xarunta Bulshada ee Gaashaan oo ku taal Magaladda London.
14kii Oktoobar, qarax bambo oo xoog leh ayaa ku qarxay caasimadda Muqdisho, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 358 qof waxaana ku dhaawacmay boqolaal kale halka ilaa hadda 60 qof jaan iyo cirib meel ay dhigeen aan la hayn.
“Tani macnaheedu maahan in dadkan wadamadaani ay ka soo hor jeedaan Soomaalida, laakiin waxaan ula jeedaa in kuwa taladda dalka ay ka go’do aysan daneyneyn Arrimha soomaaliya ka dhacaya,” ayuu yidhi.
Weerarkii ka dhacay Soomaliya – Waxaa uu ahaa kii ugu xuma abid ee soo mara Soomaaliya inta la og yahay ee taariikhda soo gashay – Hadaba wereerkas ayaa yimid wax yar ka dib markii dil toogasho ahlagu hoobtey uu ka dhacay Las Vegas, laakiin dad badan oo Soomaali ah ayaa xusay kana dhidhiyey xasuuqaas iyaago qabtey baaroor diiq ku aaddan xasuuqi Muqdisho.
Drones-ka Maraykanku waxaay galaftaan noolasha Soomaali badan marka loo eego bambooyin
“Waxaan u maleynayaa in Soomaaliya ay tahay mid la ilaaway,” ayuu yiri Wali Yuusuf, oo ah guddoomiye kuxigeenka xarunta bulshadda ee Gaashaan. “Waa murugo aad ogtahay, nolosha Afrikada kuma jaanqaadi karto nolosha dadka reer galbeedka, gaar ahaan Soomaaliya.”
Wali ayaa sidoo kale dhaleeceeyay doorka Mareykanka, oo ciidamadooda ay weerarrada ku qaadeen Al-Shabaab 12kii Nofembar, iyagoo dilay dhowr qof. Horaantii bishan, Mareykanka ayaa markii ugu horeysay weeraray bartilmaameedyada kooxda Islaamiga ah (IS) ee Soomaaliya ku sugaan.
“Xaaladda ugu xun ee haysata dadka Soomaaliyeed ee ay maalin kaste la kulmaan maaha oo kaliya qaraxa laakiin sidoo kale weerarrada diyaaradaha Mareykanka ka fuliyaan Soomaaliya, halkaas oo ay xaruuntooda ay ku taal Dalka Jabuuti,” ayuu yiri Wali. Sidaad la socotoba “Weerarrada diyaaradaha bilaa duliyaha ah waxaay dilaaan maalin kaste Soomaali badan marka loo eego argagixisada wax ay dishoo maalin kaste,” ayuu yiri.
Kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta xukumadda Soomaaliya ee ay reer galbeedku tageeraan, iyaago dagaal kula jiray in ka badan toban sano, haddana wali ma aysan sheegan mas’uuliyadda weerarkii 14-kii October, laakiinse waxaay sheegteen kii 28-ka bishii Oktoobar.
In xiidiida loo siibo maal-gelinta melah ay ka helaan al-Shabaab
“Waa inaan ka taqalusna kafaalo-qaadayaashooda oo xidiidada loo siibo, qof kastoowaa og yahay mesha ay wax ka helaan,” ayuu yidhi Sahel Yuusuf. “Maanta hadda indhaha calaamka iyo Soomaalidaba oo dhan waxaay ku egaayaan Wadamadda Qalijka, sabaabtoo ah taasi waa meesha gargaarka dhaqaale uu ka soo baxayo ee ay shacabkeena ku gumaadayaan.”
Kormeerayaasha Qaramadda midowbay ayaa ku andacoonaya in Eritrea ay maal-galiso Al Shabaab si ay ula dagaallanto hoosna ugu dhigto awoodda gobolka, Itoobiya, Waa cadowgeeda muddada dheer soo jiraay. Balse, Eritrea ayaa si joogta ah u beenisay eedeymaha loo soo jeediyey.
Sahal Ayaa waxaa la weydiyey in wax iska badaleen tan iyo markii Masiibadda ku habsatey Muqdisho, Sahel Yuusuf ayaa sheegay in ay Soomaalida ay arrintan mideysay laragti ahaan: “Weerarradu waxaay bedeleen xaaladda dadka ee ku wajahan argagixisada, dadku ma baqayaan hadda, waxaay u soo baxeen waddooyinka taas oo ah markii ugu horreysay tan iyo markii xagjiriintu bilaabeen ololahooda ka dhanka ah waddankeena ee ku saleysan xasuuqa shacabka, waxaan aragnay dad si toos ah u canbaareynaya Al Shabaab, Marki ugu horeysay”ayuu yiri.
Ku Bedel bamka Buug iyo Qalin
Inkasta oo ay jirto nabadgelyo-xuma sii socota ee Soomaaliya, taas oo laga dhaxlay kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee Maxamed Siyaad Barre horraantii 1990-meeyadii, Balse Soomaalidu waxaay sheegeen inay weli ku kalsooni ku qabaan inay maalin uun Dlakood Dib ugu noqon doona isaag oo #Nabada ah.
“Waxaan dib ugu laabanaynaa dalkeenna,” ayuu yiri Wali Yuusuf, waxaan rumaysanahay in sanadka soo socda aan dib ugu laaban doono Soomaaliya.
Waxaan jeclahay in aan wax baro dadka dhallinyarada ah ee aan fursad waxbarasho aan helin, “ayuu yiri, isaga oo carabaabey o dul joogsadey yirina boqolkiiba 75% carruurta waqti xadirkan kusugaan dalkii ma haystaan hanaan waxbarasho oo ku filaan.
“Waxaan rumeysanahay inaan u baahannahay inaan bamka iyo qoryaha aan ku bedelno qalinka iyo buuga si aan u barno dadka da yar, da’yartu waa hogamiyaasha bari, hadii aan wax la bari da’yarta dalku kama baxaayo fowdada aan ku jirno.”
Turjume: Ali Musa